Tao Kae Noi Big Sheet Classic Flavour32G 1 Box 12 Pcs – SUNNY eSTORE
Tao Kae Noi Big Sheet Classic Flavour...
Tao Kae Noi Big Sheet Classic Flavour32G 1 Box 12 Pcs
SUNNY Everyday StoreSKU: 8857107232054
Tao Kae Noi Big Sheet သည် ကြွပ်ရွသည့် ကင်ထားသော ရေညှိချပ်ကြီးများဖြင့် ထုပ်ထားပြီး၊ Tao Kae Noi ၏ ဂန္ထဝင်ဆားနှင့် ငရုပ်ကောင်းဖြူအရသာ ပါဝင်သည်။ ရေညှိချပ်များအား အာလူးကြော်အစား အရသာအလွန်ရှိသည့် အဆာပြေစားစရာတစ်မျိုးအနေနှင့်လည်း စားသုံးနိုင်သည်။
ခေါက်ဆွဲပွဲများပေါ် သို့မဟုတ် မီဆိုဟင်းချိုထဲသို့ ရေညှိချပ်များအား ချေ၍ထည့်ပြီးလည်း မြန်ဆန်စွာနှင့် အလွယ်တကူဖြူး၍ စားသုံးနိုင်သည်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ရေညှိ (၈၅%)၊ စားအုန်းဆီ၊ အိုင်အိုဒင်းဆား၊ ငရုပ်ကောင်းအဖြူ၊ အနံ့အရသာဖြည့် စွက်ပစ္စည်း - sodium inosinate ၊ sodium guanylate
ပါဝင်မှု - သီးခြားစီထုပ်ထားသည့် ရေညှိချပ်အထုပ် ၁၂ ထုပ် (၁ ဘူး)
Tao Kae Noi Big Sheet isapack of large, crispy grilled seaweed sheets with Tao Kae Nois classic salt & white pepper flavour. The seaweed sheets makeagreat alternative to crisps as an on-the-go snack.
You can also crumble the seaweed sheets over noodle dishes or into miso soups foraquick and easy garnish.
Ingredients: Seaweed (85%), palm oil, iodine salt, white pepper, flavour enhancer: sodium inosinate, sodium guanylate.
Includes: 12 individually wrapped packets of seaweed sheets (1 box)